မြန်မာနိုင်ငံကဒုတိယအိမ်ဖြစ်နေပြီမို့ အတတ်နိုင်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းမြှင့်တင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ဆယ်လီ Sinon Loresca - Myitter
မြန်မာနိုင်ငံကဒုတိယအိမ်ဖြစ်နေပြီမို့ အတတ်နိုင်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းမြှင့်တင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ဆယ်လီ Sinon Loresca
October 6, 2019 Myitter ပြည်တွင်းသတင်း 0
ဖိလစ်ပိုင် က မော်ဒယ် Sinon Loresca ဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ချစ်လွန်းလို့ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာဆိုရင် ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး မြို့ကြီးတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးတော့ အခုအချိန်အခါမှာတော့ ပုဂံကို သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးတော့ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာဆိုရင် ပုဂံမှာ အရမ်းကို ပျော်ခဲ့သလို ၊ အရမ်းလည်း ကျေနပ်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါအပြင် ပုဂံကို ရောက်သွားတာ ဟာ ကမ္ဘာအပြင်ကို ထွက်လိုက်ရသလိုပဲ စိတ်မွန်းကြပ်မှုတွေကို ပြေလျော့စေပြီးတော့ အခြား ခရီးသွားတွေကိုလည်း ပုဂံကိုလာခဲ့ဖို့ ၊ နောင်တ မရဘူးဆိုတာ အာမခံတယ်လို့ Sinon Loresca က ပြောဆိုပါတယ်။
သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို ချစ်မြတ်နိုးတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ခနခန လာမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာဟာသူ့ရဲ့ ဒုတိယအိမ်ဖြစ်နေပါပြီလို့ ဖွင့်ဟပြောဆိုလာပါတယ်။ သူဟာ လာမည့် အသက် ၃၁ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သူ့ရဲ့ Fans တွေနဲ့အတူ ထူးထူးခြားခြားလုပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကိုတော့ အံ့သြစရာ ဖြစ်အောင်လို့အခုမပောသေးပါဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် သူဘယ်လို အံ့သြစရာတွေလုပ်မလဲဆိုတာ သူ့ရဲ့အားပေးထောက်ခံသူတွေကတော့ စိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိကြပါတယ်။
source-Eleven Hall of Fame
ဖိလဈပိုငျ က မျောဒယျ Sinon Loresca ဟာဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံသားတှကေို ခဈြလှနျးလို့ ဒုတိယ အကွိမျမွောကျ မွနျမာနိုငျငံကို လာရောကျလညျပတျနတော ဖွဈပါတယျ။ သူဟာဆိုရငျ ရနျကုနျ ၊ မန်တလေး မွို့ကွီးတှကေို သှားရောကျလညျပတျခဲ့ပွီးတော့ အခုအခြိနျအခါမှာတော့ ပုဂံကို သှားရောကျလညျပတျခဲ့ပွီးတော့ ရနျကုနျလဆေိပျကို ပွနျလညျရောကျရှိလာပွီ ဖွဈပါတယျ။
သူဟာဆိုရငျ ပုဂံမှာ အရမျးကို ပြျောခဲ့သလို ၊ အရမျးလညျး ကနြေပျမှုရှိခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါအပွငျ ပုဂံကို ရောကျသှားတာ ဟာ ကမ်ဘာအပွငျကို ထှကျလိုကျရသလိုပဲ စိတျမှနျးကွပျမှုတှကေို ပွလြေော့စပွေီးတော့ အခွား ခရီးသှားတှကေိုလညျး ပုဂံကိုလာခဲ့ဖို့ ၊ နောငျတ မရဘူးဆိုတာ အာမခံတယျလို့ Sinon Loresca က ပွောဆိုပါတယျ။
သူဟာ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ နိုငျငံသားတှကေို ခဈြမွတျနိုးတာကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံကို ခနခန လာမှာ ဖွဈပွီးတော့ မွနျမာဟာသူ့ရဲ့ ဒုတိယအိမျဖွဈနပေါပွီလို့ ဖှငျ့ဟပွောဆိုလာပါတယျ။ သူဟာ လာမညျ့ အသကျ ၃၁ နှဈပွညျ့မှေးနမှေ့ာ ကို မွနျမာနိုငျငံရဲ့ သူ့ရဲ့ Fans တှနေဲ့အတူ ထူးထူးခွားခွားလုပျသှားမှာ ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါကိုတော့ အံ့သွစရာ ဖွဈအောငျလို့အခုမပောသေးပါဘူးတဲ့။ ဒါကွောငျ့ သူဘယျလို အံ့သွစရာတှလေုပျမလဲဆိုတာ သူ့ရဲ့အားပေးထောကျခံသူတှကေတော့ စိတျဝငျစားလြှကျရှိကွပါတယျ။
သမီးလေး စုမြတ်မွန် ရေတိမ်မနစ်ရအောင် မျှဝေပေးကြပါအုံးရှင်
ယုံကြည့်သူတွေရှယ်ထား မယုံကြည့်သူတွေ ကျော်သွားပါ.. ပြည့်ဝ ချမ်းသာ ရေလုံငွေထုပ် ယတြာ
မြန်မာပြည်တွင် ရောဂါကပ်ဆိုးပြန့်ပွားမှာစိုး၍ ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် ကောင်းကင်မှ ဆရာတော်ကြီးများ ပရိပ်ရေများပတ်ဖြန်း ….
အထည်ဆိုင် အဝတ်လဲခန်းတွင် ကျန်ခဲ့သော ပိုက်ဆံအိတ် အတွင်းမှ ပိုက်ဆံ(၅)သိန်း အား နှိုက်ယူသွား …
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ ထိုးသတ်မည့် အောင်လအန်ဆန်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်း ….
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ပြောကျကငျးသညျ့ ဆေးဝါးနှဈမြိုး သွစတွေးလြ သုတသေီမြားက ရှာတှပွေီ့ ….
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် Coronavirus ကာကွယ်ဆေး အမေရိကန်မှာ လူနဲ့ စတင်စမ်းသပ်